Manualidades On bụ webụsaịtị ewepụtara maka ụwa nke Mee N'onwe Gị nke anyị na-agwa gị ọtụtụ echiche na echiche mbụ ị ga-eji mee onwe gị. Iji nyere gị aka, ndị otu web nwere ndị nwere oke ọ passionụ na-achọ ịkọ ahụmịhe ha na nka ha na nka nka.
El Ndị isi nchịkọta akụkọ nke Crafts On Ọ bụ ndị edemede na-eso ya dere ya mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akụkụ ya, egbula oge dee anyị site n'ụdị na-esonụ:
Ebe obu na m nwere ike icheta na m masiri ike iji aka m kee ihe: ide ihe, eserese, ime nka ... amuru m akuko banyere nka, mweghachi na nchekwaba ma ugbua ana m elezi anya na uwa izi ihe. Mana n'oge oge m ka na-ahụ m n'anya ịmepụta ma nwee ike ịkekọrịta ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ.
Abụ m onye hụrụ ihe okike n'anya na ọrụ aka kemgbe m bụ nwata. Banyere ihe masịrị m, ekwesịrị m ịsị na abụ m onye nkwenye na-enweghị atụ nke achịcha bekee na foto, mana m na-anụkwa ọkụ na ịkụziri ụmụaka m na ndị okenye niile nka m. Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ inwe ike ịme ọtụtụ ihe nwere ike iji aka anyị mee wee hụ ókè mmebi anyị nwere ike iru.
Enwere m okike site na okike, na-ahụ ihe niile ejiri aka mee ma nwee mmasị na imegharị. Enwere m mmasị inye ndụ ọ bụla ihe nke abụọ, imepụta ma mepụta ihe niile ị nwere ike iji aka m chee. Karịsịa, mụta iji ihe eji eme ihe dị ka ndụ. Mkpụrụ okwu m bụ, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ọzọ maka gị, jiri ya mee ihe ọzọ.
Ọ dịghị ihe na-enye afọ ojuju karịa ịhụ nka emechara nke gị. Ọ bụ ihe omume ntụrụndụ na-atọ ọchị na okike. Leba anya na mkpokọta m wee malite ime nka gị. Ị ga-enwe obi ụtọ!
Aha m bụ Marian, amụrụ m ihe ịchọ mma na ime ụlọ. Abụ m onye na-arụsi ọrụ ike na-enwe mmasị iji aka m mepụta: eserese, gluing, ịkwa akwa ... M na-enwekarị mmasị ọrụ aka ma ugbu a, m na-eso ha.
Bachelor of Music History and Sciences, onye nkuzi guitar oge gboo na gụsịrị akwụkwọ na nkuzi nkuzi Music. Kemgbe m dị obere, enwere m agụụ maka ọrụ aka. Agba bụ otu n'ime njirimara m. M na-eme nkuzi na ịntanetị ka ọtụtụ ndị mmadụ kerịta agụụ ha maka imepụta m.
Onye edemede, onye editọ na onye ọrụaka nke blog na ọwa YouTube "El Taller de Ire", na-ekepụta ọdịnaya gbasara N'onwe Gị, ọrụ nka na nka. Ọkachamara ọkachamara na mosaics, na -emepụta ngwaahịa nka na usoro a maka ụlọ ahịa mma, na ụrọ polymer na mgwakota agwa na-agbanwe agbanwe, na-akpụ ma na-arụ ọrụ karịa afọ 2 maka ịwụda Clay.
Ọrụ m na-amasị m mgbe niile ka m na-ewere onwe m dị ka onye okike. Ọ na-atọ m ụtọ na ole na ole ị nwere ike ime nnukwu ihe.
Site na Rosario, Argentina, amalitere m ihe ọghọm iji mepụta ọdịnaya weebụ ka m na-agbaso akara mmụta iwu m. Ahụrụ m ọrụ aka n'anya site na nwata, ma na-enye ha ndụ nke abụọ na ihe a ga-atụfu.
Cecilia Diaz kwuru
Abụ m onye na-arụsi ọrụ ike, na-arụsi ọrụ ike ma na-agbanwe agbanwe. Achọrọ m ide na itinye aka na okike m na Blog, n'ihi na ụzọ ahụ, ana m ekerịta ha na ndị dị ka m nwere mmekọrita maka nka.
Mepụta ihe bụ ihe okike, na iche n'echiche na-eme ka anyị kee ihe. Enwere m olileanya na ihe ndị m kere eke na-enye gị echiche na mmetụ iji hazie ndụ gị. N'ihi na ọ bụrụ na anyị nọ n'ụlọ anyị, anyị na-atụ anya ịhụ ngosipụta nke ngosipụta nke onye anyị bụ.